Ikhosi ye-BIM 4D-isebenzisa i-Navisworks-Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi ye-BIM 4D-isebenzisa i-Navisworks
Siyakwamkela kwimeko ye-Naviworks, isixhobo sokusebenzisana sika-Autodesk, esenzelwe ulawulo lweeprojekthi zokwakha.
Xa silawula iiprojekthi zokwakha nezokulima, kufuneka sihlele kwaye sihlolisise iintlobo ezininzi zeefayile, siqinisekise ukuba iinkalo ezahlukeneyo zisebenza kunye, kwaye sidibanisa idatha ukwenza intetho enamandla. Nge-Autodesk Navisworks ungakwenza oku nokunye okuninzi.
Kule khosi uya kufunda indlela yokwenza uphononongo lokusebenzisana kweefayile ukusuka ku-Revit, Autocad, Civil 3D, Plant3D kunye nezinye iisoftware, zonke ngaphakathi kweNaviworks. Siza kukufundisa ukuba uthathe ukhenketho olubonakalayo lweemodeli kunye nokwenza ukulinganisa ulwakhiwo. Uya kufunda ukuba ungalujonga njani uphazamiseko olwenziweyo kwaye wenze imifanekiso ye-photorealistic yemodeli emanyeneyo.
Sebenza ngokubambisana kumaqela e-BIM
Fumana izixhobo zokuhlola kunye nokuhlela iifayile ze-BIM ezininzi
Yongeza ukhenketho olusebenzisanayo kwiprizenteyishini yakho
Ukunikezelwa kwemimandla evela kwiinkqubo ezahlukeneyo
Yenza ixesha lokubaleka kwi4D
Yenza uvavanyo lokuphazamiseka phakathi kweemodeli ezininzi zoqeqesho
Izinto ezifuneka kuqala
Akukho mfuneko yokuba nolwazi lwangaphambili
Ngubani le khosi:
Iingcali ezinxulumene noyilo kunye nokwakhiwa kwemisebenzi
Yiya kwikhosi yeNavisworks
Iikhosi-BIM MEP Iikhosi-Ukusebenza kweBIM Iikhosi-Ulwakhiwo lweBIM Iikhosi zokuhlaziya
IDiploma - Ingcaphephe ye-BIM MEP